အခွင့်အခါသင့်၍ ကြုံကြိုက်ချိန်တွင် နိုင်ငံတော် နှင့် နိုင်ငံသား အကျိုးစီးပွားအတွက်စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ သစ္စာတို့ဖြင့် အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့ | Pyithu Hluttaw
အခွင့်အခါသင့်၍ ကြုံကြိုက်ချိန်တွင် နိုင်ငံတော် နှင့် နိုင်ငံသား အကျိုးစီးပွားအတွက်စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ သစ္စာတို့ဖြင့် အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့
၁။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှု ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ အပေါ် လွှတ်တော်က ဆွေးနွေးအတည်ပြုရမည့် အချိန်ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဝက်လက်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် သူရ ဦးအေးမြင့်က
အဆိုတင်သွင်းပြီး မြစ်ကြီးနား မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်က အဆိုကို ထောက်ခံတင်ပြကာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ တခဲနက် အတည်ပြုချက် အရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ၎င်းနောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှု ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းကာ ပြည်သူများ၊ ပါတီများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြုံပြုချက် များရယူပြီး ကော်မတီဝင်များနှင့် တက်ရောက်ခွင့်ရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချက် များမှ ထွက်ပေါ်လာသော အစီရင်ခံစာအပေါ် အပြုသဘောဆန်သော မူသဘောဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခွင့် များရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊အမျိုးသားညီလာခံမှ စတင်စဉ်းစား ဆွေးနွေးခဲ့မှုအပေါ် အခြေတည်ခဲ့သည့် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုကာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် အသက်ဝင်ခဲ့၍ ယနေ့အချိန် ကာလတွင် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ (၂၀၀၈)နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
၅။ ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေး၊ အတည်ပြုရေးနှင့် အသက်ဝင်ရေးတို့တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း(ယခု ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ)မှ အဓိကပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
၆။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)ဖြစ်ပေါ်လာရေးတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်း(ယခု ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)၏ စိတ်စေတနာမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် အလျင်အမြန် ပေါ်ထွန်း၍ ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပေါ်လာကာ အိမ်နီးချင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် ရင်ဘောင်တန်းပြီး တန်းတူ ရည်တူနေထိုင်ဆက်ဆံနိုင်ရေး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် အချို့ဥပဒေ ပုဒ်မများကို ခေတ်ကာလအခြေအ‌နေနှင့် လျော်ညီအောင် ပြင်ဆင်သင့်သည်များကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။
၇။ ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အသစ်ထပ်မံရေးဆွဲခြင်းမပြုပဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်သည်များကို သတိရှိရှိ ဉာဏ်ပညာအမြော်အမြင်ဖြင့် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၏ မျှော်မှန်း ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနှင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်သော နိုင်ငံအဖြစ် ရောက်ရှိစေရန် နောက်မဆုတ်တမ်း နောက်မရွံ့တမ်း ရှေ့ကိုသာတိုး၍ ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၈။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပဒေသရာဇ်မြေရှင်ခေတ်၊ နယ်ချဲ့ကိုလိုနီခေတ်၊ ဖက်ဆစ်ခေတ်၊ ပါတီစွဲ ဝါဒစွဲ ပြင်းထန်သောနိုင်ငံရေးခေတ်၊ ပါတီစုံပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်၊ တပ်မတော်က အုပ်ချုပ်သော တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်၊ တပ်မတော်သားအကြီးအကဲဟောင်းများ ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်၊ တပ်မတော်အစိုးရ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီခေတ်တို့တွင် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။
၉။ ထိုခေတ်ကာလများတစ်လျှောက် ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ ရသည်။ ရွှေထီးဆောင်းနိုင်သော အခိုက်အတန့်ကာလတိုတစ်ခုလောက်သာရှိပြီး ကျန်ခေတ်များတွင် နိုင်ငံသားအများစုမှာ ဒုက္ခဆင်းရဲမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
၁၀။ အဆက်ဆက်သော အစိုးရအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့ခေတ်တွင် တိုင်းပြည်တိုးတက် စေရန်နှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် ရည်မှန်းချက်ထားရှိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ရလဒ် အချို့မှာ မကောင်းခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို့ရလဒ်မကောင်းရခြင်းမှာလည်း ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပယောဂများ၊ နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ရမည့်သူများအားလုံး ပါဝင်နိုင်မှုမရှိ၍ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ အမျိုးသားအချင်းချင်း သင့်မြတ်မှု မရှိခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ရပါသည်။ အဓိကပြဿနာမှာ ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက် ထားသော အစိုးရမဟုတ်၍ ပြည်သူအများစုနှင့် ကမ္ဘာကလည်း လက်မခံခြင်းကြောင့် ပြဿနာအမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကိစ္စများ ကို သင်ခန်းစာယူ၍ နိုင်ငံသားအားလုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေက ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနှင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးရန် လမ်းကြောင်း ပေါ်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ တချို့က ယခုအခါ အစိုးရသစ်ပေါ်ပေါက်နေပြီဟုပင် တင်စား ပြောဆို နေပြီဖြစ်သော်လည်း ပြောင်းလဲရေး(Reforms)များကို အမှန်တကယ် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် စိတ်ထား(Mind Set)နှင့် တည်ဆဲဥပဒေများကစ၍ ပြောင်းလဲ သင့်သည်များကို ဦးစွာပြောင်းလဲရပါလိမ့်မည်။
၁၁။ တည်ဆဲဥပဒေများကို နိုင်ငံသားတိုင်း၊ နိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်သည့်သူတိုင်း (သံတမန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်ကိစ္စရပ်မှ လွဲ၍) လိုက်နာကြရမည်။ တည်ဆဲဥပဒေဆိုသည့် အထဲတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုလည်း တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ဟန်ချက်ညီညီ ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲလာသည့် ဥပဒေနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများက အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ကြရပါမည်။ တရားရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကလည်း လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ခွင့်ရရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ တရားရုံးသဖွယ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကလည်း ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ကြရပါမည်။ ပြည်သူ အားလုံးကလည်း ဥပဒေကိုလေးစား လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီသော ဥပဒေများဖြစ်စေရန် မပြောင်းလဲပဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်၍ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်သည်ကို သတိပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အောက်ပါ ဦးတည်ချက်(၃)ရပ် ချမှတ်ထားပါသည်-
- ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု၊ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကို ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီစွာ ပိုမို တည်ဆောက်နိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဖြစ်လာစေရေး၊
- တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအကြား ယုံကြည်မှုခိုင်မာသော အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်ရေး၊
- နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး။
၁၄။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုသည် သိမ်မွေ့ခက်ခဲနက်နဲသည်ဆိုသော်လည်း ထိုဦးတည် ချက်များနှင့် ယှဉ်တွဲသုံးသပ် ဆောင်ရွက်လျင်၊ စိတ်ကောင်းစေတနာဖြင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ကြလျှင် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ၊ တိုင်းရင်းသားများ အတွက် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါ သည်။
၁၅။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၁၂)သည် လိုအပ်လျှင် ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က တာဝန်ရှိသည်နှင့်အညီ တာဝန်ယူ၍ အချိန်ကိုက်ပြင်ဆင်ရန် စတင်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဟု ဆိုသည့်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးက တိုင်းပြည်ကောင်းရန် နိုင်ငံသားများအကျိုးရှိရန် စိတ်ကောင်း စေတနာဖြင့် အပြုသဘော ဆောင်ကာ ပြည်သူအပေါ် နိုင်ငံတော်အပေါ် မှန်ကန်သော သစ္စာရှိမှု များဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုပါသည်။
၁၆။ နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့်လည်း တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူများအပေါ်ထားရှိသော မေတ္တာတရား၊ သစ္စာတရားနှင့် စေတနာမှန်များ ပေါ်လွင်အောင် သက်သေပြဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုပါသည်။ ထို့နည်းတူစွာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်များကလည်း ပြည်သူ့မျက်နှာ၊ နိုင်ငံမျက်နှာကို မေတ္တာနှင့် သစ္စာတရားထားရှိ ကြည့်ရှုဆောင်ရွက်ပေးရမည့် အချိန်အခါကောင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၇။ ယနေ့ကာလတွင် တိုင်းရင်းသားများတောင်းဆိုနေကြသည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေး ကိစ္စရပ်များသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပါရှိပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)သည် အခြေခံမူ သဘောများအရ ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရလျှင် ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီစနစ် (Federal Democracy) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပင်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်များက သတ်မှတ်ထားကြပါသည်။ သို့ရာတွင် အာဏာခွဲဝေမှု(Power Sharing)၊ ကြွယ်ဝမှု/ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်ခွဲဝေမှုများ(Wealth Sharing/Resource Sharing)များကို သင့်တင့်အောင် ပြန်လည် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း ဗဟိုဦးစီး ချုပ်ကိုင်မှုများ ဖြေလျော့ ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးလျင် ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီစနစ် (Federal Democracy) ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
၁၈။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှု ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ကိုယ်စားလှယ်များက စိတ်ကောင်းစေတနာမှန်များထားရှိကာ အပြုသဘော ဆောင်သော ရိုးသားပွင့်လင်းမှုများဖြင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပြီး အောင်မြင်အဆင်ပြေစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြလျှင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကို ရှေးရှုနိုင်ပြီး ယင်းတို့မှတစ်ဆင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနှင့် ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်ကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ကာ ငြိမ်းချမ်းသာယာသော ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် နိုင်ငံဆီသို့ ချီတက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၉။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အောင်မြင်အဆင်ပြေစေရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် သာမက နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးစီးသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးစီးသော တပ်မတော်သားများနှင့် ပြည်သူများ အားလုံးတို့သည်လည်း နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မြှင့်တင်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် လမ်းခင်း ပေးနိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရေးပါအရာရောက်သော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လျက် ရှိသကဲ့သို့ တူညီသော တာဝန်ဝတ္တရားများ လည်း ရှိနေကြပါသည်။
၂၀။ အထက်ဖော်ပြပါ ခေါင်းဆောင်များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက အမှန်တကယ် ကောင်းမြတ်သော စေတနာ၊မေတ္တာ၊သစ္စာတို့ဖြင့် အခြေအနေပေးထားချက် များကို အချိန်အခါ ကောင်းနှင့် ကြုံကြိုက်ချိန်တွင် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအကျိုးစီးပွား အတွက် အမျိုးသားရေး တာဝန်ဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အတွက်လည်းကောင်း၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဈေးကွက်စနစ် စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာသော ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် နိုင်ငံအဖြစ် ရောက်ရှိရေးအတွက်လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အတွင်းမှ စတင်ဆောင်ရွက်မှုတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၂၀၁၄ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်
Let’s do together with goodwill, compassion and truthfulness for the interest of the State and people at the opportune time
Now, it is the time for the Pyidaungsu Hluttaw to discuss and approve the Report of the Committee on the Implementation of Constitution Amendment.
The proposal of amending the Constitution was submitted by Thura U Aye Myint, Pyithu Hluttaw Representative of Wetlet Constituency and seconded by U Thein Zaw, Pyithu Hluttaw Representative of Myitkyina Constituency. The proposal was unanimously approved by the Pyidaungsu Hluttaw.
The Committee on the Implementation of Constitution Amendment was formed and, the opinions and suggestions from people, parties and social organizations were collected. There were chances to discuss, in principle, on the report of the members of Committee and the nominated Hluttaw representatives constructively.
The present 2008 Constitution, based on the discussions of the 1993 National Convention, was ratified on 29 May 2008 and has come into force on 31 January 2011.
The Union Solidarity and Development Association (now the Union Solidarity and Development Party) significantly involved in the drafting, ratification and coming into force of the Constitution.
In the process of drafting the 2008 Constitution, the Union Solidarity and Development Association (now the Union Solidarity and Development Party) had good intentions of transforming Myanmar toapeaceful, modern and developed nation with multi-party democratic system and market economy rapidly and attaining equal status in relations with her neighbours and the countries in the world. In the course of implementation of the Constitution at present, it is necessary to amend some sections of the Constitution in accord with the prevailing situation.
In order to fulfill the people’s aspiration of peaceful, modern, and developed nation with multi-party democracy and market economy system, the amendments of Constitution should be advanced carefully and wisely without draftinganew one.
Myanmar had been experienced through the eras of feudalism, colonialism, fascism, multi-party parliamentary democracy system, political parties with strong ideological bias, the Union Revolutionary Council, and the Burma Socialist Programme Party, the State Law and Order Restoration Council, the State Peace and Development Council led by the former leaders of Tatmadaw.
Throughout those eras, people had encountered internal armed conflicts. There was onlyashort period of golden-age and most of the people were in trouble with poverty foralong time.
Although the successive governments had aimed the development and stabilization of the country, the results were not always good. It was because of the internal armed conflicts, instigation from home and abroad, lack of both the national solidarity due to non-inclusiveness in politics and good term among nationalities. Those non-elected governments had faced many difficulties and the main issue was that the people and the international community did not recognize them. By those lessons, the 2008 Constitution paved the way of reforming the country toamulti-party democracy and market economy system. There were some comments that the new government has been emerged. Indeed, to achieve the reform processes, the mindset and the inappropriate existing laws should first be changed.
Nobody is above the existing laws except in the case of diplomatic privileges and immunities. The 2008 Constitution is also one of the existing laws. At the same time, the political, administrative, economic and social reforms should be carried out harmoniously and simultaneously.
The administrative organizations should implement the new laws in accord with the present circumstances effectively. There should be an independent judicial system. The Constitutional Tribunal of the Union, acting as the court, should perform in line with the laws. The entire people must abide by the laws. It is to be noted that the reform process could not be taken place without amending the existing laws appropriately.
The Pyidaungsu Hluttaw has adopted three main objectives in the process of Constitutional amendments.
Emergence of the Constitution which can rely more for the sovereignty, peace and tranquility, and development of the Republic of the Union of Myanmar in accordance with the present political system;
Achieving eternal peace by building the trust worthy national solidarity among national races;
Continuing the accelerated democratic transformation of the State and People.
14. Despite the constitutional amendment process is delicate, difficult and complex, the fruitful results for the State, its citizen and nationalities can be obtained, if the negotiation be carried out with goodwill and in line with the above-mentioned objectives.
15. The Section (12) of the 2008 Constitution has been prescribed with the intention to amend it, if it is necessary. As Pyidaungsu Hluttaw is primarily responsible for the amendment of Constitution, the process should be commenced now in order to complete it on time. In the process, all the members of PyidaungsuHluttaw, the Representatives of Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw and Representatives of Defense Services should keep in mind the positive attitudes such as goodwill and truthfulness for the interest of the State and people.
16. The members of Hluttaws who represent the various political parties should prove their goodwill, compassion and truthfulness for the State and people. Similarly, it is the right time for Defense Services Personnel and independent representatives to consider the benefit of the State and people with compassion and truthfulness.
17. The concept of self-determination, autonomy and equal rights claimed by the nationalities nowadays have been already prescribed in the 2008 Constitution. After analyzing the 2008 Constitution, the scholars have recognized it as the Federal Democratic Constitution. If provisions of power sharing, wealth and resource sharing be renegotiated and amended appropriately, and with measures of decentralization, the Constitution will beabetter and complete Federal Democratic Constitution.
18. If the members of Hluttaws discuss the Report of the Implementation of Constitution Amendment Committee with goodwill and honesty, the national solidarity, national reconciliation and peace will be attained. Asafurther step, the multi-party democracy and market oriented economy will be accelerated towardsapeaceful, modern and develop nation.
In order to amend the Constitution successfully, not only the Pyidaungsu Hluttaw, but also the Union Government led by the President, the Tatmadaw led by the Commander-in-Chief of Defense Services and the entire people are equally responsible and important to pave the way in strengthening the democratic reform in the country.
I earnestly appeal and urge all those leaders, individuals and organizations to take advantage of this opportunity to give hands to the Pyidaungsu Hluttaw in upholding the national duties of non-disintegration of the Union, non-disintegration of national solidarity, perpetuation of sovereignty with goodwill, compassion and truthfulness forapeaceful and modernized nation with multi-party democracy and market economy system.
Thura U Shwe Man